एमाले महाधिवेशन : भूगोलमा खटिएका नछुटून्, नेतासँग सेल्फीमै रमाउने नअटून् बिहीबार, मंसिर ९, २०७८
कम्युनिस्टहरु किन जातीय मुद्दा उठाउँन चाहँदैनन् ? आइतबार, कात्तिक २१, २०७८
अन्तर्वार्ता: कम्युनिस्टहरुले जातीय मुद्दा नउठाउँदासम्म परिवर्तन असम्भव छ शुक्रबार, कात्तिक १९, २०७८
तिहार, विज्ञान र ब्रेन तिहार विज्ञानमा आधारित सांस्कृतिक उत्सव हो । त्यसैले यस पवित्र सांस्कृतिक उत्सवलाई मौलिक रुपमा मनाउनुपर्छ । देउसी र भैलो अलग-अलग किसिमको सांस्कृतिक उत्सव हुन् । देउसी र भैलो खेल्ने दिनमात्र होइन तरिका पनि फरक छ । आधुनिकताको लहडमा यस पर्वमा विकृतिहरु भित्रिन दिनु हुँदैन । बुधबार, कात्तिक १७, २०७८
मासु खाने कि नखाने ? मासु खाने कि नखाने ? भन्ने विषय प्राचीन कालदेखि वर्तमानसम्म मात्र होइन भविष्यमा समेत विवादकै रूपमा रहिरहनेछ । धेरैजसो विद्वान् पनि आफ्नो रुचिकै किनारा लागी एकपक्षीय प्रमाणलाई लिएर विवादित विषयमा आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्न अग्रसर हुने भएकाले तिनका विचारहरू सर्वग्राह्य हुन सक्तैनन् र तटस्थ भएर विचार प्रवाह गर्ने व्यक्तिहरू पाइन पनि वर्तमानमा निकै मुस्किल छ । सोमबार, कात्तिक १५, २०७८
जबज 'फेज आउट' भयो, अब समाजवाद एउटा पार्टीले कस्तो नारा दिन्छ, कस्ता विचार बोक्छ र सारा प्रतिनिधिलाई कतातर्फ लैजान्छ भन्ने विषय यहाँ महत्वपूर्ण देखिएन। अहिले पार्टीको नारा, विचार र विधान भन्दा व्यक्ति महत्वपूर्ण देखिएको अवस्था छ। संस्थागत प्रणाली भत्किएकाले नै तपाइँले ओलीजी निर्विकल्प देखिएको ‘होडिङबोर्ड’ र ‘बुख्याँचा’ देखि लिएर व्यक्तिलाई महत्व दिएर बनाइएका गीतहरू देखिनु र सुनिनुको कारण नै एमालेमा आन्तरिक रुपमा संस्थागत जीवन नराम्ररी ध्वस्त हुनु हो। आइतबार, कात्तिक ७, २०७८
‘बा’ संस्कृति, ओली र गोकुलधन्दा अहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीलाई शक्तिशाली बनाउने निहुँमा गैर मार्क्सवादी चिन्तन मौलाउन थालेको छ । आइतबार, असोज ३१, २०७८
सबैका लागि मानसिक स्वास्थ्य स्नायु प्रणालीको प्रभावकारी सुसंचालनका लागि शारीरिक स्वास्थ्य आवश्यक पर्छ । त्यस्तै व्यक्तिको समाजसँगको व्यवहार र सहभागिता उसको मानसिक र सामाजिक स्वास्थ्यसँग गाँसिएको हुन्छ । त्यसैले स्वस्थ जीवनका लागि शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्यप्रति गम्भीर हुनु अति नै आवश्यक छ । आइतबार, असोज २४, २०७८
कसरी कार्यान्वयन होला लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नयाँ बजेट ? बजेटको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त यसको कार्यान्वयन हो । यसका लागि अवधि छोटो छ । आर्थिक वर्ष शुरु भएको तीन महिनापछि विधेयक पेश भएको छ । प्रक्रिया पुराएर पास गरेर कार्यान्वयनमा जानेबेला सम्म अर्को एक महिना बित्छ । यसरी बाँकी रहेको आठ महिनामा बजेटले लिएका लक्ष्य खै कसरी हासिल होलान ? आइतबार, असोज २४, २०७८
बडादशैंमा माछामासु नेपालीहरुको महान् चाड बडादसैं असुर शक्तिमाथि दैविक शक्तिको जीतको रुपमा मनाइने चाड हो । यो चाड परिवारिक पुनर्मिलन र एकताको चाड पनि हो । यस चाडलाई राम्रो लगाउने र मीठो खाने पर्वको रुपमा पनि लिइन्छ । शुक्रबार, असोज २२, २०७८
अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश ? प्रकारान्तरमा खुलापन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रका प्रमुख र आधारभूत स्तम्भ हुन् । खुलापन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको फोक्सो हो भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्राणवायु हो । जब प्राणवायु छैन भने फोक्सो कसरी चल्छ ? अनि जब फोक्सो नै चल्दैन भने शरीरले कसरी काम गर्छ ? बुधबार, असोज २०, २०७८
स्वस्थ मुटु: स्वस्थ जीवन मुटु शक्तिशाली मांसपेशीले बनेको हुन्छ । यस अंग सम्भवतः मानिसको शरीरको सबैभन्दा बलियो अंग हुनुपर्छ । सामान्यतः एउटा वयस्क मानिसको मुटुको तौल २५० देखि ३०० ग्राम जति हुन्छ । तर, यसले एक घण्टामा करिब १४ सय किलोग्राम तौल उठाउन लाग्ने बराबरको शक्ति पैदा गर्छ । बुधबार, असोज १३, २०७८
यसरी घुम्नुस् लुम्बिनी ! कोभिड महामारी शुरु भएपछि लुम्बिनी नपुगेकाहरुका लागि लुम्बिनी फेरिएको महसुस हुनेछ । लुम्बिनी विकास कोष परिसरको सडक ४ लेनमा विस्तार भएकाले यहाँ पुग्ने वित्तिकै नौलो अनुभूति हुनेछ । सोमबार, असोज ११, २०७८
सेतो चिनीको कालो यथार्थ डब्लुएचओको सुझाव छ, स्वास्थ्यका लागि प्रत्येक सरकारले चिनीको प्रयोग घटाउने नीति ल्याउनु जरूरी छ । स्वास्थ्य ठीक राख्न प्रत्येक नागरिकले खाना छनोटमा परिवर्तन नल्याई धरै छैन । शनिबार, असोज २, २०७८
मिसन पत्रकारिताको ओरालो यात्रा: लोकतन्त्र, पार्टी, गुट हुँदै व्यक्तितर्फ हाम्रा अग्रज पत्रकारहरुसँग तुलनमा गरौं । के उनको पत्रकारिताको स्वभिमानको छहारीमा हामी उभिन योग्य छौं ? पञ्चायतकालमा सफल देखिएको मिसन पत्रकारिता चौथो चरणमा आइपुग्दा जग हसाउँने स्थितिमा आइपुगेको छैन ? छातिमा हात राखेर समिक्षा गरौं । सोमबार, भदौ २८, २०७८
थारु समुदाय र बड्का आत्वारी पर्वको सामाजिक तथा सांस्कृतिक महत्व नेपालमा वड्का अत्वारीलाई ठाउँ विशेष र स्थानिय प्रथा, प्रचलन र परम्परा अनुसार फरक फरक तिथिमा मनाउन थालेको देखिन्छ । हुन त यस थारु समुदायको महान पर्वलाई एउटै तिथि मितिमा मनाउनुपर्ने हो । आइतबार, भदौ २७, २०७८
प्राकृतिक नियम र स्वास्थ्य प्रकृतिले कहिल्यै गल्ति गर्दैन । प्रकृति आफ्नो नियम अनुसार आफ्नै लय र गतिमा चल्दछ । प्रकृतिमा विद्यमान वनस्पति तथा अन्य प्राणीहरु पनि प्रकृतिको नियम अनुसार नै चल्दछन् । तर सृष्टिको सबैभन्दा बढी बुद्धिमान मानिने मानिसले नै प्रकृतिको नियम उल्लंघन गर्छन् । शनिबार, भदौ २६, २०७८
हरितालिका तीज: पहिले र अहिले ‘तीज आयो छमछमी नाची देउन, आँगनीमा कम्मर भाँची देउन’ तीज नेपाली महिलाको महत्वपूर्ण पर्व हो । विशेषगरी हिन्दू महिलाका माझ प्राचीनकालदेखि नै निकै लोकप्रिय रहेको तीज पर्व पछिल्लो समयमा सबै जाति र वर्गमा पनि प्रसिद्ध बनेको छ । बिहीबार, भदौ २४, २०७८
सुन्दर पर्व तीजको विकृत सत्य तीज संस्कृत शब्द तृतीयाको अपभ्रंश भएको मानिन्छ । नेपाली भाषा उच्चारणमा वैदिक प्रभाव रही आएको हुनाले तदनुसार तृतिज्या–त्रिज्या–त्रिज्य भन्दाभन्दै तीज प्रचलित भएको अनुमान हुन्छ । तीजलाई हरितालिका पनि भनिन्छ । आलिको अर्थ सखी हो (आप्टे इ.२००९ः १६१) । यसरी पार्वतीकी सखी आलिद्वारा हरितको अर्थमा हरितालिका पनि भन्ने गरिएको बुझिन्छ । बिहीबार, भदौ २४, २०७८
व्रत, उपवास र तीजको मनोविज्ञान तीज भनेको ‘सौभाग्य र समृद्धि’ को निम्ति धार्मिक परम्पराअनुसार नारीहरूले शिवपार्वतीको पूजाआजा गर्ने भाद्र शुक्ल तृतीयाको दिन हो। हरितालिका पूजा हो। यो पूजा सँगिनीद्वारा जंगलमा पुर्‍याइएकी पार्वतीले ‘विष्णुसँग विवाह नहोस्, महादेव नै पति पाउँ’ भनि गरिएको निराहार व्रतको मान्यतामा अविवाहित महिलाले आफुले चाहेजस्तो पति मिलोस् भन्नको लागि तथा विवाहित महिलाले सौभाग्यको स्थिरताको लागि निराहर बसेर गरिने शिवपूजा हो। बिहीबार, भदौ २४, २०७८
हात्तीको जस्तो स्मरणशक्ति एउटा चर्चित लोकोक्ति छ, हात्तीले कहिल्यै बिर्सिदैन । त्यसैले तेज स्मरण शक्ति भएको व्यक्तिलाई यदाकदा हात्तीको जस्तो स्मरण शक्ति भएको व्यक्ति भन्ने गरिन्छ । सोमबार, भदौ २१, २०७८
व्यवहारमा चुकेका मुख्यमन्त्री ! मुख्यमन्त्रीको अर्को रुचिको क्षेत्र हो – तथ्यांक खेलाउने । सम्भवतः देशको अर्थतन्त्रसँग जोडिएका तथ्याङ्कगत आँकडासँग उनी जानकार छन् र ती तथ्याङ्कहरुलाई कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सवालमा उनी आफूलाई निकै ‘बाठो’ ठान्छन् सायद । कतिपय आंकडाहरुको प्रयोग गर्दा उनले पुराना तथ्याङ्कहरु प्रयोग गर्ने गरेका छन् । अनि आफ्नो कार्यकालमा ती आंकडाहरुमा उल्लेख्य सुधार आएको भान पार्ने गरी तथ्याङ्कहरुको प्रयोग गर्न उनी सिपालु छन् । शनिबार, साउन १६, २०७८
लकडाउन फोबिया, बालबालिकाको भविष्य र अबको समाधान करोडौँ बालबालिकाहरु विद्यालय जान पाएका छैनन् । उद्योगधन्दाहरु बन्द छन्, मजदुरले तलब नपाउँदा रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था बढ्दो छ । महामारीको यो चक्रीय प्रणाली अगाडि बढिरहँदा नेपालमा भने सरकार आँखा चिम्म गरेर बसेको आभाष हुन्छ, ऊ मात्र जान्दछ लकडाउन, अनि लुजडाउन र फेरि लकडाउन । बिहीबार, साउन १४, २०७८
सिंधु घाँटीः टकरावहरुको भूमि एक करोड बर्षअघि जसरी हिन्द महासागर हुँदै उत्तरतिर धसिइरहेको इण्डियन टेक्टोनिक प्लेट युरेसियासँग टकराएपछि हिमालय बनेको थियो, त्यसरी नै आजको इण्डिया* पनि भिन्न संस्कृति र मानिसहरु बीचको टकरावको नतिजा हो । शनिबार, असार २६, २०७८
सिंधु सभ्यताको पतन अहिले उत्तरबाट बसाइँसराई भएको भन्ने सिद्धान्त राजनीतिक कारणले मात्रै होइन पुरातात्विक प्रमाण नहुनाले पनि धेरै अनुसन्द्याताका माझ विलिन हुँदै गएको छ । किनभने ठूलो जनसांख्यिक स्थानान्तरणको पुष्ट्याई गर्नसक्ने गहकिलो पुरातात्विक प्रमाण हालसम्म फेला परेको छैन । आइतबार, असार २०, २०७८
जनस्वास्थ्यको संवेदनशिलतामा बुटवल संघीय र प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायको सहकार्यमा पालिकाहरुलेसमेत जनस्वास्थ्यको संवेदनशीलतालाई व्यवहारिक बनाउन लागेका छन् । खासगरी बुटवल उपमहानगरपालिकाले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा विशेष महत्व र चासो दिएको छ । नीति निर्माण गर्ने देखि सामाजिक संघ सस्था एबं निजि क्षेत्रको सहकार्यमा स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउने काम भइरहेको छ । आइतबार, असार १३, २०७८
यस कारण लिनु पर्दैन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विश्वासको मत खुला रुपले बहुमत प्राप्त सरकारका बारेमा पुनः विश्वासको मत लिनु पर्छ भन्नु संसदीय मान्यताका हिसाबले कुतर्क मात्र हो । यस आधारमा यो सरकार वैशाख १८ देखि २ वर्षका लागि स्वतः वैध हुन्छ र विश्वासको मत पनि लिनु पर्दैन । मंगलबार, जेठ २५, २०७८
बुद्ध र बौद्ध मनोविज्ञान गौतम बुद्ध संसारका पहिलो व्यक्ति थिए, जसले परमात्माको स्मरण बिना ध्यान गर्ने विधि दिए । बुद्धले ध्यानका लागि परमात्माको कुनै आश्यकता ठानेनन् । परमात्माको मात्र होइन, ध्यानका लागि आत्माको धारणालाई समेत आवश्यक ठानेनन् । बुद्धले भने, ध्यान त स्वास्थ्य हो । तिमी स्वस्थ हुन सक्छौ । स्वस्थ भएपछि तिमीले जे खोज्न चाहन्छौ, खोज्न सक्दछौ । बुधबार, जेठ १२, २०७८
यसरी फेला परेको थियो लुम्बिनी अशोक स्तम्भदेखि पूर्वको माटाको ढिस्कोमाथि रोमन शैलीमा सेतो चुना लगाएर निर्माण गरेको त्यतिबेलाको संरचना नै हालको मायादेवी मन्दिर हो। मौर्य सम्राट अशोकले लुम्बिनीमा अशोकका वृक्षमुनि सात तहको ईंटामाथि हिफाजतसाथ राखेको जन्मस्मारक शिलामाथि पछि विभिन्न कालहरुमा संरचनाहरु निर्माण भएको पुरातत्वविद्हरुको मान्यता छ। बुधबार, जेठ १२, २०७८
नयाँ वर्ष, बाँकी सबै पुरानो ! एकाएक समाज असामाजिक भइदियो । सामाजिक सम्बन्धहरु बिघटित भए । मानवीय मूल्य र मान्यतामा ह्रास आयो । एकले अर्कालाई समस्या देख्ने मनोविज्ञान निर्माण भयो । कोही नयाँ व्यक्ति गाउँघरमा देखिए, त्रसित हुनुपर्ने अवस्था बन्यो । एकले अर्कालाई सहयोग भन्दा पनि हेलाहोचो गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो । बुधबार, वैशाख १, २०७८
बहसमा आएको वन डढेलो सरकारको मूल योजनामा कहिले आउला ? आजको समयसम्म आईपुग्दा वन डढेलोको बढोत्तरी अत्यास लाग्दो छ । यस बर्ष एकैदिन पाँच सयभन्दा धेरै ठाउँहरुमा अगालागी भइसकेको छ । अहिलेकै अवस्थामा मौसम रहिरहेमा यो क्रम अहिले नै रोकिनेवाला छैन । अहिले बल्ल बन डढेलोले जति प्रकोपको रुप लिंदै छ उति नै बढि यसको खोजिनीति र चर्चा भइरहेको छ । पछिल्लो समयमा आकाशमा देखिइरहेको तुवाँलोको विषयलाइ वन डढेलोसँग जोडेर चिया पसलदेखी चौबाटोसम्म खासखुस भएको सुन्दा वन डढेलो अव साँच्चै एक बहसको बिषय बनेको छ जस्तो भान हुन्छ । बिहीबार, चैत २६, २०७७
खुल्ला त सत्ताको ताल्चा ? मुलुकको अर्थराजनीतिक रुपान्तरणमा नेपाली काँग्रेस र यसको समग्र नेतृत्व नै असफल प्रमाणित भइसकेको छ । तर, लोकतन्त्रमा निर्वाचनबाटै नयाँ विकल्पको खोजी गर्नुपर्छ । त्यसैले यसको वैकल्पिक निकास त अब हुने वैधानिक निर्वाचनबाटै खोज्नुपर्छ । तर, त्यो बेलासम्मको लागि भने संसदको दोस्रो ठूलो दल भएको नाताले नेपाली काँग्रेसकै पहल स्वभाविक हुन्छ । शनिबार, चैत २१, २०७७
भारतले छिमेकी देशहरुलाई कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध नगराउने भारतले अबको केही महिना कोरोनाभाइरसविरूद्धको भ्याक्सिन निर्यातमा रोक लगाउने भएको छ । भारतको केन्द्रीय सरकारले मंगलबार ४५ वर्षमाथिका सबै नागरिकलाई अप्रिल १ देखि भ्याक्सिन दिने निर्णय गरेको थियो । बिहीबार, चैत १२, २०७७
Email: [email protected]gmail.com,